Tanzania Inoshuvira Kuona Kutanga Kwekutanga Dunhu Rekushanya Chiratidziro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Tanzania Inoshuvira Kuona Kutanga Kwekutanga Dunhu Rekushanya Chiratidziro
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Tanzania yagadzirira EAC yemunharaunda kushanya kwekuratidzira
Chiratidziro chekutanga uye chemhandara chekushanyirwa kwenharaunda dzenhengo nhanhatu dzeEast Africa Community (EAC) ichaitirwa kutanga kwaGumiguru. Yakagadziriswa kukwezva makambani evashanyi uye vagadziri vemitemo kudunhu rese rematunhu.
Yakapihwa zita reEast Africa Regional Tourism Expo (EARTE) 2021, chiratidziro chakarongerwa kuvhurwa kubva Gumiguru 9 kusvika 16.
Chiitiko ichi chakwezva vatambi vakakosha vekushanya kubva kunhengo dzenyika dzeEEC.
EARTE 2021 ndiyo yekutanga yekushanya kwenzvimbo inoitika muEast Africa, yakanangana nekuvaka chirongwa chakabatana icho chichaunza pamwechete nyika nhanhatu kuti dzigadzire danho rekushanya kwenzvimbo.
Vatori vechikamu kuEARTE vanosanganisira vanobatirwa vatengi vekunze uye vezvenhau vanozotora chinhanho kufumura hupfumi hwekushanya hunowanikwa muEast Africa kubva kumatunhu ega ega.
Chiratidziro ichi chichateverwa nerwendo rwekujairira kune vatengi vepasi rese uye vezvenhau kune dzimwe nzvimbo dzinoyevedza dzevashanyi muTanzania neEAC dzinosanganisira Indian Ocean nemahombekombe egungwa, mhuka dzesango, runako runoshamisa, nzvimbo dzezvakaitika, uye hupfumi hwetsika.
Dingindira reratidziro iri kuuya rinoti "Kukwidziridzwa kweResilient Tourism yeKubatanidzwa kweNyika nehupfumi." Dingindira rakagadzirirwa kuzivisa kukosha kwekuvandudza nekuvandudza chikamu chezvekushanya nenzira isingagadzirisike kudzikisira nekukanganisa kwechikamu nedenda reCOVID-19.
Dunhu reEEC rakarasikirwa neanosvika makumi manomwe kubva muzana evashanyi vepasi rese mu70, pamwe nekurasikirwa kwakakura mumihoro yekushanyirwa uye mabasa ane chekuita nekushanya, akadaro. iyo EAC Munyori Mukuru, Peter Mathuki. Kuchengetedza mhuka dzesango mudunhu iri kwakarwadziswa zvikuru nedenda kuburikidza nekurasikirwa nemari yekuchengetedza, yakawanda yacho inogadzirwa kuburikidza nevashanyi vanoshanyira nzvimbo dzakachengetedzwa uye kuchengetedza mhuka dzesango mudunhu rese.
Chikamu chezvekushanya ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekudyidzana kweECA, nekuda kwechipo chayo kune hupfumi hweMubatanidzwa nyika maererano neGDP (inenge 10%), mari yekutengesa kunze (17%), nemabasa (angangoita 7% ). Hupfumi hwayo hwekuwedzera uye kubatana pamwe nezvimwe zvikamu zvinobatsira mukubatanidzwa kwayo senge kurima, kutakura, uye kugadzira zvakanyanya.
Chinyorwa 115 cheChibvumirano che EAC chinopa mushandirapamwe mubazi rezvekushanyirwa, umo Nyika Dzekubatana dzinovamba kugadzira nzira yakabatana uye yakarongeka yekusimudzira nekutengesa kwekushanya kwakanaka mukati uye munharaunda.
Kunyanya, ivo vanoita kuratidzira marongero muindasitiri yekushanya, kumisikidza kusarudzwa kwehotera, nekuvandudza chirongwa chedunhu chekusimudzira kushanya, uko kuedza kwemunhu mumwe nemumwe kunosimbiswa nedanho redunhu.
Nhengo dzenhengo dzeEEA dzanga dzichikurudzira kushanya kwenyika kumatunhu epasi rose ekushanya, kusanganisira World Travel Market (London) uye International Tourism Bourse (ITB) muBerlin.
Chiratidziro yeRegional Tourism ichazotambirwa neVamwe Nyika panguva yekutenderera.
Panguva yeMusangano Wayo Wakajairika wakaitwa musi waChikunguru 15, 2021, iyo EAC Sectoral Council yezveKushanya neWildlife Management yakafunga kuti United Republic Tanzania inofanira kutora 1st EAC Regional Tourism EXPO mu Arusha muna Gumiguru 2021. Sarudzo yedhorobha reTanzania - nzvimbo yekushanya yekuTanzania neguta resafa - yakaitwa kuti iratidze mukana wevatori vechikamu kubva kumatunhu ese e Partner States.
Chinangwa chechiratidziro ndechekusimudzira EAC senzvimbo imwe chete yekushanya, kupa chikuva chebhizinesi revanoona nezvevashanyi kune bhizinesi (B2B), uye kuzivisa nezvevashanyi.
Chiitiko ichi chinosanganisira zviratidziro nevanopa zvekushanyirwa vanopa, kumhanyisa network uye misangano yeB2B, nemisangano yezvekushanya nemisoro yemhuka dzesango. Nekuremekedza chikamu chekushanyirwa, idzi madiki-madiki anozotenderedza zvinhu zvakaita sekumira kwekushanya nekugadzirisa matambudziko, kushambadzira kwekushanya kwedijitari, kuvandudzwa kwenzvimbo dzekushanya dzakasiyana-siyana, nemikana yekudyara kwekushanya uye zvinokurudzira.
Kune rimwe divi, madiki-ane chekuita nemhuka dzesango anosanganisira Kurwisa Kuuraya Nenjodzi uye Zvisiri Mvumo Yekutengesa Zvemusango uye kukosha kwehupfumi hwemhuka dzesango mudunhu iri.
Zvinonyanya kukosha futi, chiratidziro ichi chinosimudzira kushanya kwenzvimbo dzedunhu kuwedzera mukushanya kwepasirese kuburikidza nekusimudzira zvigadzirwa zvekushanya kune vagari veEEC. Izvi zvichavakira pane zvakaitwa kare senge danho rakaitwa neKanzuru yeMakurukota kuti Partner States dzinopa mwero wakasarudzika wevagari vanoshanyira zvinokwezva zvekushanya mukati medunhu nemitero inoshanda kune vemunyika.